Nhau - Yakanakisa mhando China Jpt Mopa Ruvara Fiber Laser Cutter Raycus Max Ipg 20W 30W 50W Simbi Kumaka Engraving Cutter Machine
Maprinta eFilament 3D akanaka, asi anowanzo kuganhurirwa saizi.Madhindi eLaser sintering anopa mibhedha mihombe yekudhinda, asi anotakurawo mutengo we $250,000. Tinofanira kuitei?Zvakanaka, nekuda kweOpenSLS, zvinokwanisika kushandura laser yako. muchina wekucheka mune yako wega SLS 3D printer.
Takaunza OpenSLS kakawanda zvisati zvaitika, asi zvinoita sekunge yave mhinduro yakakwana (uye inogona kushandiswa). Nguva pfupi yadarika yakaburitsa chinyorwa chetsvagurudzo payakavhurika sosi selective laser sintering (OpenSLS0 yenylon uye biocompatible polycaprolactone (PDF)), iyo yakazara. dhizaini uye chimiro.
Chikwata chakagadzira hardware inogona kushandura laser cutter ine mubhedha saizi ye60 cm x 90 cm kuita SLS printer.beauty?Mazhinji ehardware ndeye laser cut, zvinoreva kuti unogona kutoshandura laser cutter kuita 3D printer.
Mafaira ekugadzira anogona kuwanikwa paGitHub yavo.Iyo hardware inogona kukubhadhara mari inosvika $2,000, iyo nzungu inofananidzwa nekutengesa laser sintered printer.Pane ruzivo rwakawanda muzvinyorwa zvavo-hatigoni kuvhara ruzivo rwakawanda munyaya imwe chete. Kana iwe pakupedzisira kuvaka imwe, ndapota tizivise!
Ndinofanira kudzvanya pane imwe yemalink kuti ndione kuti vari kutaura nezvei.Ndiri kubvunza kuti, chii chinonzi SLS? Lol “Selective Laser Sintering (SLS) is an additive kugadzira process inoshandisa laser kusanganisa hupfu hwakatsetseka. mune yakasimba 3D chimiro."
Ndinoda kuziva kana zvichibvira kushandisa yakaderera melting point metal alloys.Ndinoziva kuti huru yekutengeserana SLS drilling rigs inogona kushandisa aruminiyamu kana kunyange simbi, asi kunyunguduka kwemamwe masimbi machena kunofanira kunge kuri mukati memhando ye laser cutting machines.
Nekudaro, simbi inowanzo tarisisa uye inotonhorera pane epurasitiki, saka kunyangwe ini ndichitarisira kuti ishande, zvingava nyore kuisa kupisa zvakananga, senge 3D welding robhoti yakashumwa ne hackaday gore rapfuura http://hackaday.com/ 2015/06/13/6-axis-robot-arm-3d-prints-a-metal-bridge/
Zvakanaka, mamwe maindasitiri emaindasitiri anoshandisa laser sintering nenzira iyi, saka inogona kuitwa.Indekisi yekuratidzira yesimbi yakawanda yeupfu iri mumutsara wakafanana neinoratidziro indekisi yemapurasitiki eupfu.Pakuwedzera, kune akawanda zinc alloys ane inonzwisisika MP iyo. inofanira kunge iri mukati memhando ye laser cutting machines.Mubvunzo chaiwo ndewekuti, ndinofunga, kana aya alloys ari anobatsira kugadzira zvinhu.
Iyo yekumberi yekupedzisira yezvigadzirwa zvemaindasitiri kazhinji ine polarizing optics yekutora kana kutsausa danda rinoratidzwa kubva kune laser sosi.Parizvino, mamiriro ezvinhu aya haapo neCO2 lasers.Kuwedzera, kunze kwekunge paine yakanaka argon kuzadza kana vacuum mune yakavharirwa. , simbi dzakawanda dzichangowedzera oxidize (kana kupisa) .Kuoma uye mari yekugadzirwa kwesimbi iri kuwedzera nokukurumidza.
Zvawanyora ichokwadi, ndosaka ndafunga kushandisa simbi yemumagaba kana imwe brazing alloy inogoneka pakudziya kwakanaka.
Ini ndichaedza brazing alloys.Ndinofunga kuti vachapa zvigumisiro zvakanakisisa nemukana muduku wechepfu yesimbi.
Mufananidzo weOLD_HACK unofanirwa kucherechedza: iblue laser.Kune simbi isina chinhu, iyo inopfenyura spectrum ichave yakanyatsoshanda kupfuura CO2 laser.Izvi zvinorevawo kuti zvishoma zvishoma danda rinoratidzwa kumashure kune laser uye saka kusagadzikana.
Muchiitiko ichi, wavelength haina basa.Shanduko yekutora maitiro esimbi muwavelength range ye400nm kusvika 10um haina kukwana kuita basa pano.Chinonyanya kukosha hunhu ndeye reflectivity nekuda kwekupfava kwepamusoro uye kunaka.Kuenzaniswa ine nzvimbo isina kurongeka, nzvimbo yakati sandara inogona kuratidza chiedza chakawanda kudzokera pamusoro.
Diode lasers inonyanya kunzwa kune back reflections.End kukuvadzwa kwechiso, wavelength kusagadzikana, uye danda patani shanduko shanduko inogona kuitika.Kuzviparadzanisa kweFaraday kunogona kushandiswa kuderedza dambudziko iri rinogona kuitika.
Gasi lasers (senge CO2 lasers inobatanidzwa pano) haizokuvadzwa nekumashure kunoratidzira.Muchokwadi, nzira iyi inogona kushandiswa kuita nemaune Q-kuchinja kuti uwane yakakura pulse peak simba.
Zvichida shandisa Nd: YAG lasers, ytterbium fiber lasers kana lasers akafanana, ayo anowanzo shandiswa kucheka simbi panzvimbo yekushandisa CO2 lasers.Paaya mashoma ~ 50W mazinga emagetsi, iyo 10um laser kubva kuCO2 laser inonyudzwa zvakanaka ne organic zvinhu ( zvakadai sepurasitiki), asi hazvizove nemigumisiro pane simbi.
Ndeipi saizi yechinhu chekutanga chepurasitiki? Ndinovimba kuti yakakura uye haigone kupararira mumhepo, nekuti kana zvidimbu zvepurasitiki zvikapinda mumhepo uye zvakanamatira pagirazi rako, lenzi, uye zvinobuda zvinobatana, iwe munguva pfupi uchange uine zuva rakashata. .
Kuti uderedze mamiriro ezvinhu aya, optics inofanira kunge yakasununguka zvachose kubva ku "nzvimbo yebasa" kudzivirira poda yepurasitiki kuti ipinde.
Hi, kungokuudza mashoko akanaka!!Kambani yandinoshandira, tinogadzira uye tinogadzira poda yeSLS PA12, PA11, TPU, uye polycaprolactone uye waxes ye sls.Ndinonyatsofunga kuti iyi ndiyo teknolojia yeramangwana!! Kana iwe uchida zvakagadzirirwa sls zvinhu, ndapota inzwa wakasununguka kundibata!marga.bardeci@advanc3dmaterials.com
Ini ndinofunga laser sintering majoini angave anotonhorera-hapana bepa rinodiwa! Unogona here kupa zvinhu?
Zvakanaka, handikwanise kukupa iwe.Izvi Iri rinogona kunge riri zano rakanaka kuNetherlands .Asi ndinoziva kuti vamwe vanhu vakagadzira sintered paper, pamwe neshuga yakakanyiwa uye nesquick.
Nekushandisa webhusaiti yedu uye masevhisi, unobvuma pachena kuiswa kwekuita kwedu, kushanda uye kushambadza makuki.Dzidza zvimwe
Nguva yekutumira: Zvita-27-2021
Zvishongo Welder, Laser Cnc Machine, Laser Cnc Machine Kutengeswa, Carbon Fiber Laser Cutter, Automatic Laser Welder, Sheet Metal Laser Cutter,